धनी बन्ने यी ३ तरिका आजै फलो गर्नुहोस् - जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
गृहपृष्ठ » अर्थ » धनी बन्ने यी ३ तरिका आजै फलो गर्नुहोस्
काठमाडौं । संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् । कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाएका हुन्छन् । तर त्यसले उनीहरुलाई शान्ति भने मिल्दैन ।
सपना देख्नुस् : सपना देख्नेले मात्रै समाजमा ठूलो प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा र पैसा समेत कमाउन सक्छ । सपना नदेख्ने र महत्वाकाक्षा नराख्नेले समाजमा कुनै पनि प्रकारको प्रगति गर्न स्क्दैन । सपना र महत्वाकाक्षाले मात्रै तपाईको दायरलाई फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्छ ।
आफ्नो क्षमताको पहिचान : जानकारहरु भन्छन्, तपाईको क्षमता, योग्यता के हो त्यो पहिचान गर्नुस् । त्यसले तपाईलाई सफल हुन मद्दत मात्रै गर्दैन, मार्गनिर्देशन समेत गर्दछ । तपाई आनै बारेमा यो जान्न जरुरी छ कि तपाई सबैभन्दा सहज र सपजलो तरिकाले के कमा गर्न सक्नुहुन्छ ।
कडा मेहनतको विकल्प छैन : पैसा कमाउने विषय सजिलो र सहज छैन । त्यसका लागि कडा मेहनत र डेडिकेशनको जरुरी पर्दछ । असाध्यै तल्लो तलबाट माथि उठेका संसारका ठूला मान्छेहरुले जीवनमा गरेको संघर्षका कथा पढ्नुस । दुःखबाट सफलता हासिल गरेर व्यक्तिको कथा र जीवन संघर्षले तपाईलाई प्ररित गर्दछ ।